China XY-4311G Stainless ephothiweyo Ilaphu Metal Ukwenziwa kunye Factory | Shuolong
I-XY-4311G yentsimbi yentsimbi eyenziwe ngelaphu
I-XY-4311G- umnatha wentsimbi osetyenziswe njenge-facade, ayidlali nje kuphela kwindima yokuhombisa, ikwanokusebenzisa indawo yokuvula yendawo yokwakha yentsimbi ukuvimba indawo yelanga.
Material: Yenziwe ngentsimbi eshayinayo kunye neCopper
Ubunzima: 8.54kgs / m2
Ubunzima beMesh: 10mm
Unyango lomphezulu: PVD
Ubude beMax: 3m
Ubude beMax: 4m
Ngaphezulu, ukuba ufuna ukongeza izinto zoyilo lwesinyithi kwiiprojekthi zakho eziqhubekayo okanye ezizayo, nceda unxibelelane nathi ngokuthe ngqo. Ukongeza kwiimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye namaxabiso aphezulu, sinokubonelelaIinkonzo ezenzelwe wena kunye nezisombululo zofakelo lweNkqubo yakho yeeprojekthi.
Sinokukunika izixhobo ezifanelekileyo ngokweemfuno zeprojekthi yakho. Nokuba ngumgaqo kaloliwe othe tye okanye uloliwe ojijekileyo onendlela egoso, uShuLong unokukunceda uyiqonde. Ubungqingqwa bezincedisi esikunika zona ubuncinci yi-2mm, kwaye ubomi benkonzo bude. Ukuba usenemibuzo malunga nenkqubo yofakelo, nceda ungathandabuzi ukunxibelelana nathi, siya kukunika ividiyo eneenkcukacha zokufaka ukuze uphendule amathandabuzo akho.
Amava e-1.40 yeminyaka: Ngaphezulu kweminyaka engama-40 yamava emveliso yocingo.
Inkonzo yesiqhelo: Ukongeza kwiifayile zethu ezikhoyo, sinokuzilungiselela iimfuno zakho zoyilo
Ixabiso 4.Best: Siza kutshatisa nayiphi na isampulu okanye ukumelwa onikwe ezinye iinkampani. Ukuthatha ithuba lesithembiso somdlalo wexabiso usithumele nje ikoteyishini ebhaliweyo evela kwenye inkampani kwaye siya kulibetha ixabiso labo ubuncinci nge-10%
Ukuba ufuna ukubeka iodolo okanye ufuna ukwazi ngakumbi ngeenkcukacha zentsimbi, nceda uthumele umyalezo wakho kwiwebhusayithi yethu, usitsalele umnxeba okanye usithumelele i-imeyile. WNdiza kukuphendula ngaphakathi kweeyure ezingama-24!
Edlulileyo: XY-4356 Yenziwe ngentsimbi eshayinayo wocingo kulwakhiwo loLuntu
Okulandelayo: Isikrini se-XY-4311 seMetro yesinyithi soLwakhiwo olungaphezulu
I-XY-A1283 yelaphu yensimbi yokwakha iOfisi
XY-A2412B Mid-Shade khazi Metal mesh
XY-4356 Stainless wocingo for Bu yoLuntu ...